Ungazi njani ukuba ndiyingcambu kwi-Android: Izicelo ezithathu zayo | Iindaba zeGajethi
Wazi njani ukuba ndiyingcambu
Ukwenza ingcambu okanye ukungayenzi, yinto ebuzwa ngabasebenzisi abaninzi be-Android kwizihlandlo ezininzi. Xa oku kwenziwe emnxebeni, iimvume ze-superuser ziyafumaneka, ezinika ithuba lokuba tshintsha nantoni na kwisixhobo. Ke ivula ukwenziwa ngokwezifiso zizonke, yenye yeenkalo abasebenzisi abazixabisileyo ngokuqinisekileyo.
Inokuba uthenge ifowuni kwaye ufuna ukwazi ukuba esi sixhobo siyingcambu. Oko kukuthi, ufuna ukwazi ukuba unayo le mvume isebenze kwisixhobo, esikunika inkululeko epheleleyo yokutshintsha into oyifunayo kuyo. Ukuze ufumane, kukho iindlela ezininzi ezikhoyo.
Ukuba awuqinisekanga ukuba umile ngamanye amaxesha okanye ukuba uthenge ifowuni yesibini, kulungile ukujonga ukuba ifowuni ingcambu okanye hayi Ngethamsanqa, zininzi iindlela zokwenza kwi-Android, eya kuthi isinike olu lwazi kumcimbi wexesha. Ngumbandela wokukhetha eyona ikulungeleyo kwimeko yakho.
1 Umhloli wokuHlola
Kukho isicelo esenzelwe ukufaka kwi-Android enikezelwe ngokuchanekileyo koku. Injongo yesi sicelo Oko kukuthi sixelele ukuba ifowuni yingcambu okanye hayi. Ke kwimizuzwana embalwa siya kuba nakho ukufikelela kolu lwazi kwisixhobo, ngaphandle kokuba yingxaki enkulu.
Ekuphela kwento ekufuneka siyenzile kule meko kukukhuphela usetyenziso kwifowuni, iyafumaneka simahla kwiVenkile yokuDlala, emva koko uyivule. Ngaphakathi kwesicelo kukho iqhosha lokukucela ukuba wenze olu hlalutyo, oluza kusixelela ukuba asiyongcambu na okanye hayi. Emva kwemizuzwana embalwa olu hlalutyo lwenziwa, oluya kusixelela ukuba sikhona okanye asikho.
Ukuba siyingcambu, iwindow edadayo izakuvela kwiscreen, ethi isibuze ukuba ngaba sifuna ukunika imvume yomsebenzisi omninzi kwesi sicelo. Ukuba samkela, ngoko sele sixelelwe ukuba ifowuni ixhomekeke. Ke sinemvume esele yenziwe. Ukuba oku akwenzeki, ke kukuba asimiliswanga kule ngqondo. Kulula kakhulu ukujonga umbulelo kwesi sicelo.
Esi sicelo sesibini sisebenza ngendlela eyahlukileyo, kodwa sinokusinceda nathi ukuba sifuna ukwazi ukuba iselfowuni yethu ixhomekeke na okanye hayi. Kule meko, isicelo sinikezelwe ukuvumela Masenze amanyathelo ngemiyalelo ebhaliweyo, ngokungathi yiLinux okanye iiWindows, kodwa kwifowuni kule meko. Ke ngoko, singayisebenzisa imiyalelo esibonayo ukuba sinemvume yengcambu kwifowuni esebenzayo.
Ngumyalelo su ezakusinceda kule meko. Kufuneka siyifake ngolu hlobo kwisicelo, ukuze sihlalutye ukuba siyingcambu okanye akunjalo kwimeko yethu. Ukuba xa ufaka lo myalelo, iwindow edadayo iyavela kwiscreen, oko kuthetha ukuba le fowuni ibangelwe. Ngokuchasene noko, ukuba akukho nto yenzekayo, ayimiliswanga. Kulula kakhulu ukujonga, njengoko ubona.
Isicelo sinokukhutshelwa simahla kwi-Android. Ngapha koko, ngaphakathi kuyo akukho nto ithengwayo okanye iintengiso zalo naluphi na uhlobo. Ke sinokuthi sigxile ekusebenziseni ngokwesiqhelo kwaye ngaphandle kwamaxhala malunga noku. Enye indlela elungileyo yokubona ukuba asiyongcambu ye-Android okanye hayi.
Isiphelo sendlela ye-Android
Umthuthukisi: UJack Palevich
Esi sicelo sesithathu siye safumaneka kwi-Android ixesha elide. Sisicelo esenzelwe ukujonga ubungakanani bezinto kunye nokusinika ulwazi malunga nesixhobo ngexesha lokwenyani. Ke masenze njalo ukwazi ukubona inqanaba leselula ngawo onke amaxesha (i-RAM, i-CPU, njl. Kodwa kwakhona, isicelo sinomsebenzi osithandayo, kuba unakho ukuxelela ukuba ngaba ifowuni imile okanye ayikho.
Indlela elungileyo yokufumana isixhobo esipheleleyo sokuskena, ngaloo ndlela uyazi ukuba kukho into eyenzekayo kuyo. Kwangelo xesha, isinika olo lwazi lusithandayo kule meko, nokwazi ukuba asiyongcambu na. Yenza njalo ngoyilo ekulula kakhulu ukulusebenzisa, olusivumela ukuba sikwazi ukufikelela kolu lwazi ngamanyathelo ambalwa kwaye ngokukhawuleza.
UCastro sisicelo sokuba sinokuzikhuphelela simahla kwi-Android. Ngaphakathi akukho zintengiso okanye ukuthengwa kwalo naluphi na uhlobo, oluvumela ukusetyenziswa okuqinisekileyo kwesicelo ngawo onke amaxesha. Sinohlobo lwesibini losetyenziso olukhoyo, oluguqulelweyo, apho sifumana uthotho lwemisebenzi eyongezelelweyo. Ungazama uhlobo lwasimahla kwaye ubone ukuba kuyahlawula na ukusebenzisa uhlobo oluhlawulelweyo. Ingakumbi ukuba ufuna ukuyisebenzisela into engaphezulu kokwazi ukuba uyingcambu okanye hayi.
Umthuthukisi: I-Pavel Rekun
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Wazi njani ukuba ndiyingcambu
Ikhathalogu yePhilips Hue ikhula eSpain kwaye ivuselele iimveliso ezininzi
Sebenzisa imowudi emnyama kugcina i-30% yebhetri kwi-iPhone